Fannaan Shabaab sheegtay oo la soo bandhigay – Puntland Post
Posted on January 22, 2020 January 22, 2020 by Liban Yusuf
Fannaan Shabaab sheegtay oo la soo bandhigay
Abshir Gaarane Axmed
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay Fannaan sheegay in uu ka tirsan yahay ururka Al-shabaab.
Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugida Soomaaliya (NISA) ayaa caawa boggeeda Twitter-ka soo dhigtay muuqaal qirasho ah iyo bayaan kooban oo lagu sheegay in lagu qabtay Abshir Gaarane Axmed oo ka tirsan kooxda fanka gobalka Banaadir, una qaabilsanaa Al-shabaab xuuraanka iyo maaliyadda.
“Abshir Gaarane Axmed oo ka tirsan kooxda fanka gobalka Banaadir, una qaabilsanaa Argagaxisada Al-shabab xuuraanka iyo maaliyadda ayaa dabagal dheer kadib NISA gacanta kusoo dhigtay, iyadoo loo gudbinayo hay’adaha garsoorka” ayaa lagu yiri bayaanka NISA.
Abshir Gaarane ayaa muuqaalka ku qirtay inuu ururka Al-shabaab ku biiray sanadkii 2013, isla markaana uu u qaabilsanaa uruurinta macluumaadka iyo maaliyadda.
“Kooxdan Al-shabaab waxaan la shaqo bilaabay 2013-kii, shaqadeeda waxaa waaye Fanaan, waxaana ka shaqeeyaa gobolka Banaadir, qaybtiisa Fanka iyo Suugaanta. Aniga waxaan u qaabilsanaa qaybta macluumaadka iyo dhanka maaliyadda.” ayuu yiri Abshir Gaarane.
Abshir Gaarane Axmed oo ka tirsan kooxda fanka Gobalka Banadir, una qaabilsanaa Argagaxisada Alshabab xuuraanka & Maaliyadda ayaa Dabagal dheer kadib NISA gacanta kusoo dhigtay, Iyadoo loo gudbinayo Hay’adaha garsoorka. pic.twitter.com/SCmo35JY9s
— NISA (@HSNQ_NISA) January 21, 2020
Abshir Gaarane oo ahaa Fannaan da’yar oo aad looga yaqaanay Muqdisho ayaa wararku sheegayaan in uu xog heyn u ahaa Agaasimaha waaxda Fanka ee gobalka Banaadir Shamso Cali Macalim, hadana muddo lagu waday baaritaan.